Tativo nechinangwa - Tattoos Art Ideas
Tattoos ane chinangwa
Shiri dzinozivikanwa sezvisikwa zvekusununguka ndizvo zvikonzero nei vanhu vazhinji vari kuinki. Inogona kubatanidzwa nezvinhu zvakawanda muhupenyu uye ichi ndicho chikonzero iwe unogona kuwana varume nevakadzi vachishandisa. Vamwe vanhu vanoshamwaridzana nenyeredzi yeropa nevakasununguka, rusununguko, rugare, rudo, ruzivo, njere dzakangwara, kunaka, kunaka, mhuri, humai, hutungamiri hwemweya uye zvakawanda zvakawanda.
Nyeredzi dzenzou dzakagadzirirwa kutarisa dzakanaka uye dzinoshamisa mukugadzira uye maitiro. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei vanhu vachizvisarudzira pane zvimwe zvirongwa zvemavara. Iko kune zvakasiyana-siyana zvakagadzirirwa zvinyorwa zveshiri zvine zvinoreva zvakasiyana. Iwe ndiwe unoda kusarudza rudzi rwemhuka iyo iwe unofanirwa kuinwa mumuviri wako. Shiri dzinouya mukukura uye maumbirwo uye mumwe nomumwe wavo ane chimwe chinhu chinokosha pamusoro pavo. Vanhu vanofarira kuenda kune rusununguko kana pfungwa yekuve muhupenyu vanogona kuenda kune iyi inoratidzirwa yemaitiro. Iyo shiri inonzi tattoo inogona kuinwa pane chikamu chipi nechipi chemuviri kunze kwekuti ichiita kuti iireve yakarasika uye inogonawo kutaura zvinhu zvakawanda nezvemunhu.
Dzvanya pano kuti utarise zvekupedzisira shiri zviratidzo zvekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
ChiHindu - maererano neHinduism, mandala inogona kureva kufungisisa. Ichi ndechokuti inoshandiswa sekutarisa uye yava chigadziro pamusoro pemweya.
Mandala tattoo yakava izvo vanhu vazhinji vanoshandisa kushandisa kuti vanomiririra zvinhu zvakawanda muupenyu, sekudenga. Chiratidzo chinogona kushandiswa pakuita zvinyorwa zvakawanda zvaunokwanisa chaizvo kuziva kana iwe uri mudiwa wekinyorwa yakanaka yekunyora uye unoda pfungwa.
Dzvanya pano kuti utarise mutsva mandala maitiro ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
Njiva tattoo yakave chiratidzo cherudo, rugare uye kuzvipira. Ichi chisikwa chitsvene chechiKristu uye chakave chakakurumbira pamusoro pemakore. Njiva tattoo yauya kuzogara nesu nekuda kwerudo rwayo. Vanhu vakawanda vari kugamuchira kunaka kunouya neiyo tattoo. Pane zvakawanda zvinoreva zvinosanganiswa nejiva. Inomirira kubereka, hukadzi uyewo kunaka.
Njiva inonzi tattoo zvinoreva zvakakosha kune nyika. Inoshandiswa sechiratidzo chekushivirira. Inomirira kugadzikana nekuenderera mberi. Chiratidzo chejiva chakagadzirirwa kuva chakanaka. Njiva tsvuku inomirira kuchena uye kusava nemhosva. Hazvishamisi kuti vamwe vaduku vasikana vanoenda kwairi muinki yavo yekutanga sechiratidzo chekuchena uye kutarisirwa. Vanhu vanogona kuwedzera mamwe mifananidzo pamwe chete nenjiva kusanganisira kushandisa mharidzo kuti iudze zvinoreva zvakasiyana zvechiratidzo chejiva inowing pfungwa.
Dzvanya pano kuti utarise maveji ekupedzisira maitiro ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
Mwedzi tattoo zvinoreva
Mutsara weMwedzi wakanga uri werudzi rwekunyanya runonyanya kufanirwa nekuda kwezvinomirira. Vanhu vazhinji vanoita iyo iyo inofunga kuti ine simba pamusoro pesimba rekudenga uyewo zvekudenga, inomirira nhoroondo nesayenzi. Vanhu vanoshandisa chirevo ichi vangave vasingafariri zvinorehwa pamusoro apa nokuti mwedzi wematoto une zvinyorwa zvizhinji. Nhamba yezvinorehwa nemwedzi ndeye inoita kuti ive inoshamisa. Inogona kubatanidzwa nemamwe mifananidzo kuti ikupe zvinoreva zvinoshamisa. Zvimwe zvezvinoreva mwedzi zvinogona kuva magetsi. Avo vanotenda mumashiripiti vanogona kuina iyo tattoo pane chero chikamu chemuviri wavo. Izvozvo zvinokonzera mwedzi chimwe chinhu chinokonzera vanhu kuinyora mumitumbi yavo apo ivo ndivo avo vakati iyo inomiririra kugara uye kupenga.
Mwedzi unogonawo kuva nechinangwa kumudzimai wesstique. Mwedzi unogona kuratidzira hutano uye kune avo vari kutsvaga kubereka, chinhu chakakwana. Mwedziwo unomiririra kukura, kushata, kurangarira kweavo vaunoshuva, kusakwanisa, Wiccan kutenda, kusina simba kusunungurwa uye mutsvuku. Mutsara weMwedzi unogona kumira pamwe chete nezvimwe zvinhu kuti ugozvipa izvo zvinoreva.
Dzvanya pano kuti utarise mhemberero yakangodarika mwedzi mifananidzo yevarume nevakadzi.
Izvo zvakagadzirwa nekodpus tattoo ndeyezvishamiso pachayo ndicho chikonzero nei vanhu vane zvikamu zvakasiyana zvemuviri wavo. Iko tattoo yakaoma uye izvi ndezvekuti zvinomirira sei zvinhu zvakasiyana. Iko pachako kana kuti kunyengedzwa kwemafungidziro ehuputi ndicho chinowedzera kune unhu hweiyo octopus. Nhema dzekare dzinoti 8 senhamba inokosha mune zvakawanda zvehupenyu. Ichi ndicho chikonzero zvipenyu nemakumbo masere zvinoonekwa sezvo simba. Iyo nyuchi inowira muchikamu ichi chezvisikwa zvisiri izvo. Ikopopus tattoo zvinoreva kubva pakugona kwemakumbo kukura shure. Chiratidzo chinogona kureva kudzokorora uye kugadzirisa.
Vanhu vazhinji vanoishandisa kushandisa iyo kuti vatende kuti mafuro avo anogona kubviswa. Octopus tattoo zvakare zvinoreva kuti mune tariro mune ramangwana. Kukwanisa kweropa kukuita zvinhu zvakawanda nemakumbo ayo akawanda ndiko kunoita kuti vanhu vatende kuti chisikwa chakawanda. Iyo inoratidza kuti tatpus tattoo ndeyevaya vanoda kuberekwa patsva. Chiratidzo chinoreva magic, chakanaka uye chisina kuitika. Izvo zvakagadziriswa ne octopus ndizvo zvinoita kuti zvive pachena mumhomho nekuda kwekukwanisa kwayo kusimbisa rubatsiro.
Dzvanya pano kuti utarise mapepa ekupedzisira maitiro ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
Tiger tattoo ndeimwe yevakakurumbira zvikuru pakati peAsia. Zvinoreva iyo tiger ndizvo zvinoita kuti zvive zvakajeka. Chiratidzo chegurusi ndicho chinoreva nzira iyo munhu anorarama pasina chero kudziviswa. Zvinomirira nyama, utsinye, simba uye simba. Zvinogona kutaurwa kuti masheti ezuva nokuti anotenda kuti anotongwa nemasimba ekudenga.
Vanhu vanoenda kuT tattoo havasi kutongwa nechishuwo nekuda kwekuti vanotenda mumasikirwo. Vavengi vanoita iyi tattoo kuti varatidze kuti vane simba sei. Iyo tiger inotendwa kuti ndiyo vadziviriri veavo vakafa. Ichi ndicho chikonzero ivo vanowanzoonekwa pamakuva kana pamakuva.
Dzvanya pano kuti uone yakakurumbira tiger tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Dreamcatcher tattoo inowanikwa kune avo vanobva kuNative America. Chimiro chechivara chinomiririra hupfumi hwemagariro evanhu. Iyo tattoo tattoo inobatsira mukubvisa simba rakaipa uye risina kunaka. Vanhu vanoda kutyisa marota akaipa kana manheru vanoshandisa tattoo tattoo. Vaya vanoita tattoo vanogona kurara murugare uye vachifara. Kana iwe uri kuronga kuwana tambo yakasiyana-siyana inogadzirisa iyo inotaurira nyaya dzakawanda kuburikidza nemiridzo yaro muupenyu inogona kushandisa tattoo tattoo.
Dzvanya pano kuti uone tarisiro dzemazuva ano dreamcatcher design pfungwa yevarume nevakadzi.
Eagle tattoo zvinoreva
Zvinorehwa neGondo Zviratidzo Zvimwe zvinhu zvaunoda kuziva. Pane zvinoreva zvakawanda zvinouya ne tattoo. Iyo gondo inyoni yakave ichibwinya pasi pose uye ine simba rakabatana nayo. Rinogona kureva simba, mukana, uchenjeri, rusununguko, hupenyu hwakanaka uye hukuru, simba, kutonga, mukana, mutumwa wevanamwari uye zvekunamata. Zvinoreva zvinhu zvakawanda kune simba rakawanda. Iyo yakagadzirwa inoita kuti ive yakasiyana nehuwandu hwekudzvinyirira kwayo hwainzwa. Kune kusiyana kwakasiyana-siyana kwemakondo anouya nekutaura kwavo.
Mapapiro emakondo anotaura nezvekusununguka uye kudzivirirwa. Kana iwe uri kutsvaga rusununguko, imwe yeinki yaunogona kuenda ndeye tattoo yegondo. Idziviriro inopa ndeyekuti sei vanhu vazhinji vanoishandisa kushandisa iyo kuchengetedza zvakaipa. Kuburitsa kwechikwata chegondo kunoitwa nenzira yakadaro kuti zvinoreva zvinouya nezvo zvinotaurwa zvakakwana. Ichi ndicho chikonzero chichizivikanwa uye chisingawanzoitiki. Izvo zvisizvo zve shiri yacho chimwe chinhu chinokosheswa munyika yose. Kana iwe uchida kuva nechimiririro chikuru chehukuru hunoiswa mumuviri wako, tattoo eagle chimwe chinhu chichaita izvo zvinomiririra.
Dzvanya pano kuti utarise hurumende yekodhi mifananidzo yakagadzirwa pfungwa yevarume nevakadzi.
Zita reziso rinowanikwa mumitemo yakasiyana uye rinopesana nevaKristu kune vaIjipita tsika. Ziso richakubatsira iwe pakufananidzira masiniscience, kudzivirira kana kujekesa. Vamwe vangaita sarudzo yekumirira nyama. Hazvina mhosva mhando yechinangwa chaunacho, chitupa cheziso chiri chimwe chinhu chichakubatsira mukumiririra kwako. Kunyange kana iwe uri mupanduki, ziso rako rawakafukidza. Hakuna munhu asina kumiririrwa muzora yemaziso uye kana iwe uchikoshesa mararamiro evanhukadzi, haugoni kuita neziso reziso.
Ziso rezvisikwa zvakasiyana zvinomirira zvinhu zvakasiyana. Tora somuenzaniso maziso e-horus uye vamwe, tora tora zvinoreva zvinokosha kumunhu anoremara. Zita reziso rakanaka kwazvo uye rinotaurira pamusoro pehukuru hwemangwana rako. Ziso rave riri chimiro chekutora chinoita kuti vanhu vanzwisise mararamiro avo. Izvo zvose zvisikwa zvekuona zvevamwari zvinogonawo kumiririrwa nemaziso.
Dzvanya pano kuti utarise maziso emangwana maziso ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
Flower tattoo yakajairika uye inozivikanwa mumitemo yakasiyana-siyana yenyika. Tsika, tattoo yemaruva inowanzoitirwa vakadzi. Runako rwemaruva rinomiririra zvinhu zvakawanda zvichienderana neduva rinoshandiswa. Iro rose rinenge rine zvarinoreva sezvimwe mamwe maruva ane zvarinoreva zvakare. Iyo tattoo yeJapan inonzi flower inowanikwa kune inonyanya kuzivikanwa uye inoreva zvakakosha kwaari. Maruva anogona kunomirira nyama, kubereka, kubereka, kutsigirwa, kurota, mashiripiti, kuonga, kutarisira uye rudo. Zvinoreva maruva zvine chokuita nemashoko okuti kupfeka kunoda kupfuurira kune vamwe vose.
Flower tattoo zvinoreva hazvikwanisi kuregererwa nekuda kwezviratidzo zvayo. Vanhu vari kuwedzera kuwedzera kwemashiripiti kuburikidza nekudhonza zvimwe zvinhu kana zvinhu kune iyo kuti muvape rudzi rwemhando yemashoko inogona kuitirwa ivo chete. Maruva ose kubva kumu rose kusvika kumaruva a lotus ane zvarinoreva. Iwe ndiwe uchasarudza pamhando yemutauro waunoda kupfuura. Flower tattoo tsanangudzo ndeimwe yepamusoro nekuda kwezvinorevekedzo uye zviratidzo zvavanogovana munyika yose. Apo maruva akawedzerwa mazwi, mavara uye zvinhu, anoratidza zvinorehwa zvikuru.
Dzvanya pano kuti utarise mapepa emangwana maziso ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
Geometric tattoo zvinoreva
Chimiro chemajini chinoreva zvinopfuura iwe unogona kufunga nezvazvo. Iine chigadzirwa chakanaka chakafanana nechikonzero. Izvo zvinorongwa izvi zvinopfuurira uye zvakananga. Chimiro chacho chine zvizhinji zvokuita nemathematics uye nguva dzose chiri chinyorwa icho vanhu vakawanda vanoshandisa kumira zvakananga, kuenzanisa uye kusagadzikana. Inotaurawo nezvekufanotaurika nekuda kwenzira iyo yakagadzirwa.
Geometric tattoo zvinoreva kureva kugadzikana uye tsika. Zvose zvine geometric zvinoratidza kugutsikana uye kufara, uyewo iyo iyo iyo ineded inoita kuti ive imwe yevasingadikanisi yerottoo. Chinhu chinoita kuti vanhu vakawanda vawane mufaro vanogona kutorwa pane tattoo. Girazimiro tattoo yakave iyo bhiriji iyo yakawanda yekushandisa mukukoshesa zvavakawana muupenyu.
Iyo inomiririrawo kunzwisisa kweanenge akapfeka. Paunenge uchida kuratidza nzira yawakanyatsorondedzerwa uye yakanyatsogadzikana muupenyu, unogona kushandisa shanduro yejometri iyo inyanzvi yemasvomhu inoratidza kuti yakarurama uye inoshamisa. Mutsara unoshandiswa pamaketani emagetsi anokwanisawo kukupa chinangwa chakasiyana. Maitiro ekugadzirwa kwejetometric ndiyo inoita kuti idikwe nevakadzi.
Dzvanya pano kuti utarise maitiro ekupedzisira geometric tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Hamsa tattoo zvinoreva zvakakura uye zvine zvinoreva zvakasiyana-siyana munyika yose. Chimiro chetambi chinoshandisa zvipfeko uye zviratidzo zvinopa iyo iyi manzwiro ekufungidzira. Vashanu vari muchitinha vanomirira pfungwa dzevanhu. Zvinotendwa kuti tattoo ye hamsa inofananidzira kuvimba, kudzivirira, kugadzikana uye ushingi. Kune nzira mbiri iyo tatto tatsa inogona kumira. Kutanga, inogona kushandiswa pakuchengeta zvakaipa kana zvinhu zvisina kunaka kure. Chinhu chinotevera ndicho icho chinoshandiswa kuunza rombo rakanaka.
Zvinyorwa zveHamsa zvinogona kugadzirwa nenzira dzakasiyana-siyana sedzakashandiswa pamwe chete neziso, zvinogona kushandiswa kureva kudzivirirwa; ziso raHorus. Zvinotendwa kuti ziso iri rinogona kuramba rakarinda vanhu uye kunyange kukanganisa zvakaipa. MuUslam, tatto tattoo inogona kushandiswa mukutaura pamusoro pezviratidzo zvishanu zveIslam. Ichi ndicho chikonzero chinonzi ruoko rwaFatima. Ruoko rwaFatima runomirira Fatima Zahra. Fatima, mwanasikana wa Muhammad.
MuChiJudha, inomiririra pfungwa shanu mumunyengetero wavo uyewo mabhuku e5 Torah. Hamsa tattoo chinoreva chinhu icho tsika dzakawanda dzakashandisa pakuonga kwezvimwe zvezvavanotenda uye mazano. Zvinoreva zvinopfuura izvo zvakare.
Dzvanya pano kuti uone hunamato yezvino hamsa tattoos design pfungwa yevakadzi.
Scorpion tattoo zvinoreva
Iro scorpion tattoo inoreva zvakawanda kuvanhu vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzepasi. Iyo tattoo inofananidzira uye inowanikwa zvikuru pamusoro pemafambiro echisikwa. Inogona kureva kukwidza uye zvepabonde mumurume nekuda kworudzi rwetambo runoita panguva yekubatana. Iyo inoshandiswa kumiririra kuvhiyiwa neMayan uye scorpion inoshandiswa nezvitendero zvakasiyana-siyana kunoreva zvinhu zvakasiyana, kunyanya kusangana neipi. Inogona kushandiswa kureva kudzivirirwa uye inomirirawo murwi.
Vakawanda vanopukunyuka kenza vanoshandisa tattoo kuti vataure nyaya yerwendo rwavo rwekenza. Varwi kana kunyange mabhokisi vanowanzoonekwa vachiita shandiso kuti varatidze kuti vari vanaani. Iro scorpion tattoo zvinoreva kurwisana uye kurwisana apo vamwe vanoitora kuti inoreva kuremekedza, kukudzwa uye kuzvivimbika. Chiratidzo chinogona kushandiswa mukutaura nezvekuda, kuoma, kurwisana, kutsungirira, kudzivirirwa, kutsungirira, kudzivirira, rufu, kuvimbika uye zvakaipa.
Iwe unosarudza kuti chii chaunoda kuti nyora yako inoreve kwauri. Kune mhando dzakasiyana dze scorpion tattoo designs iwe unogona kusarudza kubva uye umwe neumwe wavo ane zvaanoreva. Zvisinei, iwe unogona kupa chibatanidzi chettoo yako kunoreva chimwe chinhu chakasiyana.
Dzvanya pano kuti uone chinyorwa chemazuva ano chinonzi scorpion tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Skull Tattoos Zvinorehwa zvinosiyana kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Iko kune marudzi akasiyana eedhenya uye vane zvarinoreva zvakare. Pfungwa yokuti dhehenya rinoreva rufu nehuwandu hwevanhu hunogona kunge husina chokwadi kunyanya kana yakakonzerwa necheti rakakura reziso. Dhehenya rinogona kukweverwa nenzira dzakawanda uye dzinopedzisira rine tsananguro yaunoda. Tsananguro yechete inogona kuva chiyeuchidzo cheumwe munhu anofa uyewo kuti isu tose tinofanira kurarama hupenyu huno huzere.
Izvo zvigadzirwa zve skulls zvinewo zvarinoreva semutambo unozivikanwa unoita shuga skull iyo inowanzonzi Tattoo yeMexico inonzi tattoo kana tattoo skull ye tattoo. Tora muenzaniso veMexico vanoda zuva revakafa tattoo nekuda kwebasa rainoisa.
Vakadzi vanowanzoshandisa mavara mukuchinja nzira iyo vanhu vanoona tattoo uye zvinorehwawo zvakare marara.
Dzvanya pano kuti utarise huchangobva kuitika skull tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Zvinoreva Zuva Nomwedzi Zviratidzo chimwe chinhu chaunofanira kuziva kana uchienda kuinning. Mhedziso yechiratidzo yezuva nemwedzi ine maumbirwo akawanda uye zvirongwa izvo chero fashoni munhu anogona kushandisa. Chimiro che mwedzi uye zuva chimiro chinotaura pamusoro pedenderedzwa yehupenyu isingagumi. Apo hafu yezuva nemwedzi zvigadzirirwa mukati mechitenderera, zvinoreva zvingave zvakasiyana.
Kutaura pamusoro pezuva rinonzi tattoo, rinomiririra simba, simba uye kuberekwa patsva apo mutambo wemwedzi unogona kureva chikadzi chehupenyu mune dzimwe tsika kana zvinosvika kuna mwarikadzi. Apo zuva nemwedzi zvakatsvuka, zvinorevawo zvinopesana zvichienderana nemirairo yawakasarudza. Zuva iro rinowanzoti murume uyu hupenyu hwehupenyu hunogona kusanganiswa nemwedzi kuratidzira Yin Yang kukurudzira. Ihwo hukama hwemadzimai uye hwemurume hunofananidzira zvakakwana nezuva uye mwedzi tattoo.
Zuva uye mwedzi zvidhori zvinogona kutaura nezvechido chinotyisa pakati pevada. Ichi ndicho chikonzero kusanganiswa kweviri miviri yekudenga yava chinhu chinoshamisa chema tattoo chinogona kushandiswa nemunhu wese. Chimiro choga choga chinogona kugadzirwa.
Dzvanya pano kuti utarise zveruzhinji zuva uye mwedzi mifananidzo yakagadzirwa pfungwa yevarume nevakadzi.
Sun tattoo zvinoreva
Sun Tattoos yakagara yakakurumbira kunyange mumazuva ekare. Izvo zvisikwa zvezuva ndezvokukwezva kune varume nevakadzi. Kukosha kwezuva kunogona kunge kusina kunaka kana kwakanaka uye izvi zvinoenderana netsika kubva kune munhu ari kubva. Haisi chakavanzika chokuti hupenyu hahugone kusimbiswa pasina zuva. Zuva rinogona kureva hupenyu, simba, simba, rudo uye kutsigira upenyu. Inogonawo kureva kuberekwa patsva uye zvimwe zvitendero zvinewo zvinorehwa nezvezuva. Kune nzira dzakasiyana-siyana dzokuti zuva rinogona kutora uye rinenge riine zvarinoreva. Kubuda kwezuva kunogona kureva simba raMwari uye hukuru huripo. Vanhu vakawanda vanoshandisa zuva kuti vadzime sezuva dhiyabhorosi tatoti iyo yakawanda yemitambo fan inoshandisa.
Zuva rekutora zvinorehwa ndezvokuti sei vanhu vanoda kuratidza simba ravo mukati nepfungwa vanowanzoenda. Zuva rinouya nemavara akasiyana-siyana semucheka wemaruva ane zvinoreva zvakananga. Chimiro chezuva chinewo zvinoreva zvakawanda maererano netsika iyo tattoo inobva. Zviso zvezuva zvinoshamisa kwazvo uye zvakanaka kuona.
Dzvanya pano kuti utarise zveruzhinji zemazuva zviratidzo zvekuda kwevarume nevakadzi.
Muti we tattoo wava chiratidzo chekugadzirisa uye kwenguva refu. Miti nguva dzose inogara kwenguva yakareba uye inopedza makore 500 pasi pano, chizvarwa chinopera chevanhu. Ichi ndicho chikonzero miti miti inofed kuratidza hupenyu hurefu uye kugadzikana. Simba remuti uye rinogadziriswa mune chero mamiriro ezvinhu ndiro rinofadza vanhu vakawanda. Munhu wose anogona kunyora tattoo pamitumbi yavo. Muti unogona kupa dzimba nekuchengeteka kune zvakawanda zvezvisikwa. Kuchengeteka kwaunounza kune vamwe chinhu chinoshamisa. Vaya vari kutsvaga kuchengeteka muupenyu hwavo vanokwanisa kuishandisa iyo inki dzavo. Izvo mhando dzakawanda dzemiti dzine zvinoreva zvakasiyana uye zvakakosha.
Muti unoshandiswawo nedzimwe tsika dzechitendero nekuda kwekukosha kwahwo. Nehuwandu hwemiti inowanika uye iyo inofanirwa kuita iyo inomirira, chero munhu anogona kuishandisa. Iwe unogona kushandisa muti uri pedo netsika yako pakuita mamwe mazwi akasimba pamuviri wako. Mamiriro ekufananidzira emuti anogona kuita zvinorehwa nekufananidzira kwemuti wako wekurota pamuviri wako zvichienderana nemashoko aunoda kupfuura.
Dzvanya pano kuti uone chinyorwa chimiro chemuti mifananidzo yevarume nevakadzi.
Korona yekorona inokosha nokuti inoreva simba uye simba roumambo. Korona inoshandiswa seine muridzi wezvinhu zvizhinji. Vaya vanobva kumisha yeumambo vanonyoresa nyore nekatori korona nokuti iri pedyo nemwoyo yavo. Hapana nzvimbo mune zvenyika iyo korona haina kukosha kwayo. Mumiririri wekotori korona chimwe chinhu icho kunyange vakadzi vasingakwanisi kudarika.
Dzvanya pano kuti utarise hurumende yemifananidzo yakagadzirwa pfungwa yevarume nevakadzi.
Diamond tattoo chinoreva
Diamond tattoos dzinonyatsozivikanwa zviratidzo izvo zvave zvichibatanidzwa nekunaka uye pfuma. Aya mavara anoonekwa munzvimbo dzakawanda dzomuviri uye anoshandiswa sezvishongo. Chiratidzo chemadhamoni chinogona kushandiswa kutaura pamusoro pekusakundikana. Ichi ndicho chirevo chakanaka chokuti tattoo inopa nokuti haigone kuparadzwa.
Chiratidzo ndechimwe yematombo anokosha anonyanya kutsvakwa. Ichi ndicho chikonzero nei vanhu vachizviona sechiratidzo cheushingi uye runako. Kana iwe uine pfungwa iyo inokosha zvikuru yaunoda kuratidzira kunyika kuburikidza ne tattoo, iwe unogona kushandisa shandimani ye diamond. Chiratidzo chinogona kushandiswa kureva kudzivirirwa kubva kumasimba akaipa uyewo kubatsira vanhu kukurira kutya kwavo. Zvinoreva zvinogona kuva chiratidzo chekusingaperi uye zvose. Dhiyabhorosi tattoo inogona kusanganiswa nemashiripiti emashiripiti kana masimba emashiripiti. Vazhinji vevapristi vezvitendero vanoishandisa. Dhaimani yeodhini inogona kureva kuvimbika, rudo, chiedza chechokwadi, rugare uye kusingaoneki
Dhaimani yerimani inogonawo kureva madzimambo uye mararamiro. Iwe unosarudza kuti daimani yako ye tattoo inogona kurevei kwauri kana iwe uchigadzirisa maererano nemaitiro ako kana maitiro ako.
Dzvanya pano kuti utarise maziso emadzinza emangwana mazano ekugadzira varume nevakadzi.
Infinity Tattoo zvinoreva
Infinity tattoos ndeyechokwadi pamativi anozivikanwa nekuda kwezvinoreva izvo zvinounza patafura. Iyo tattoo inomiririra nhamba ye8 uye inokosha yayo isingagumi kuputika iyo yakaita chinhu chimwe nechimwe munhu wose anoda kuonga uye kushamwaridzana naye. Izvo zvisingagoneki kuti tattoo inomirira ndiyo yaunoda nayo. Inofananidzira kuberekwa patsva kana kuberekwazve mune dzimwe tsika.
Iyo tattoo inogona kugadziriswa kuva zvinhu zvizhinji muhupenyu sehupenyu, ushamwari kana rudo. Chiratidzo chinomiririra mwoyo kana kunyange nyeredzi. Chiratidzo chisina kutora chimwe chinhu chaungada kushandisa mukufambisa shoko iro rine simba rinofadza vanhu vose.
Hapana anozviita zviri nani kana zvasvika pakusayira kwekutora. Nzira iyo yakagadzirirwa uye chimiro chemasvomhu yekuongorora iyo inotaura pamusoro. Iyo tattoo isingaverengeki yava mhando yakasiyana yemashoko iyo kunyange varume vanoda kuda kushandisa kuti vataurire vavakidzani vavo kutsunga kwavo kuva nani pane zvavakanga vamboita. Iyo tattoo isingaenzaniswi inouya nenzira dzakasiyana uye hukuru. Izvo zvinoreva zvingawedzerwa zvakanyanya kana zvichiswedzerwa zvimwe zvinhu kuti zviite zvakasiyana uye zvinoshamisa.
Dzvanya pano kuti utarise huwandu hwemazuva ano hutatu husina hutano hwemazano ekugadzira varume nevakadzi.
Samurai tattoo ndeyeyo iyo tattoo iyo ine code shoma inonzi bhahido-inoreva varwi nzira dzehupenyu. Bhashido ine zvikamu zvinomwe zvinokosha zvinotaura nezve Samurai. Chiratidzo chinomiririra chiremerera, kukudza, mutsa, kuvimbika, kutendeseka uye moyo. Chiratidzo chinoshandiswawo kutaura pamusoro pekushushikana, simba uye kugadzirisa. Inogona kuratidzwa muzvinhu zvisingawaniki uye zvakasiyana nedzimwe nyuchi, hoi koi uye octopus kumirira kuchengetedzwa, rubatsiro uye ushingi.
Iko Samurai tattoo yakaita kuti zvive nani kuvanhu kuti vamirire vanhu vasingatyi uye vane ushingi. Vaifananidzira simba nesimba. Chiratidzo chinogona kuva chimiro uye varume vanoda kuishandisa mukukunda hondo uyewo rufu. Iyo samurai tattoo inotaura nezvounhu hwomunhu anenge akapfeka iyo. Chiratidzo chinogonawo kuva chikadzi uye kunyanya kutorwa mwoyo nevakadzi. Zvinoreva Samurai zvinogona kuenda munzira yakareba mukuudza vamwe nyaya iyo iwe haugone kutaura.
Kuiswa kwaSamurai tattoo kunogonawo kutaurira nyaya yakasiyana kana zvinoreva zvinogona kukutsigira pakufamba kune imwe nzvimbo yakakwirira kusiyana nemamwe mavara ekureva kunze uko.
Dzvanya pano kuti uone shanduro dzemazuva ano samurai tattoos design pfungwa yevarume.
Sunflower tattoo zvinoreva
Ita rinotarisa rinoreva zvinhu zvakawanda. Duva rinozivikanwa nokuda kwekugadzirisa kwayo uye rinogona kuva chirimo cheavo vanoda zuva, chiratidzo chezhizha kana kunyange chitarisiko cherry. Iro maruva akazvitsaurira kune zuva uye ave chinhu chinofananidzira kukura kwehupenyu. Inogona kupfeka sekorona uye nguva dzose inoratidza zuva. Vanhu vanoitora sechiratidzo chekuvimbika, mufaro, zvisikwa, ushamwari uye kupenya.
Tora yezuva rinogona kutorwa muhupenyu hwakawanda uye hukuru, uye izvi zvinewo zvazvinoreva. Iwe ndiwe unogona kuita kuti sunflower yako iende mberi kwezuva rinokosha kune chimwe chinhu chakadzika kudarika vamwe vanogona kufunga nezvazvo. Vamwe vanhu vanowedzera zvinhu uye kunyange mharidzo kune iyo iyo iyo iyo tattoo inogonawo kureva. Mitemo yakawanda inewo zvinoreva zvayo pamusoro pezuva. Chiratidzo chacho chakava chimwe chezvido zvevaya vanoda kuratidza mhosva yavo upenyu hwavo nenzira inotonhora. Kujeka kwehupenyu kunogona kuzvidzora pamuviri kuburikidza nehutano hwakasiyana. Chikamu chimwe nechimwe chemuviri chinogona kushandiswa kutaurira zvinoreva sunflower.
Dzvanya pano kuti utarise zvezuva rezuva rinonzi sunflower tattoo design pfungwa yevakadzi.
Tattoo yeHenna inoreva chinhu chakakosha kune vanoita. Icho chifukidziro chekare chemuviri chinenge chine zvinoreva zvakawanda. Inoshandiswa kureva mufaro, ruzivo uye inogonawo kufananidzira hondo, kuberekwa, zvikomborero nemichato. Tora tatna inoshandiswa kutaura pamusoro pechiratidzo uye pasina. Kuita shanduko ye henna chimwe chinhu chichakupa iyo kushamwaridzana kwemweya uye yakagadzirisa manzwiro ayo anoshandiswa kwairi.
Dzvanya pano kuti uone hunje huno huno huno tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Cat tattoo zvinoreva
Zvinoreva Kaka Tattoos zvinogona kureva zvinhu zvakawanda. Munhu anoreva ndiye munhu achasarudza zvokuita ne tattoo tattoo. Iyo kati inomiririra hutsika hwakawanda, hunosanganisira ruzivo, kubudirira, simba revakadzi, zvakavanzika, chakavanzika nekubatana nouMwari, humweya, kuberekwa patsva, mushure mehupenyu hunobatanidza, kudzivirirwa, intuition, njere, kugadziridzwa, kukwidziridzwa, nekuteerera.
Inki yekati ine pfungwa yekuva amai, kuchengetedzwa, kushamba uye kunyange kutarisira uye kuunza mari. Iwe unogona kuenda kumakati echikwata nokuti anoreva kungwara, nyasha, kunaka uye kukudzwa. Zvisinei, rave richibatanidzwa nechihedheni uye uroyi muEurope.
Makate anoshandiswa kutaura pamusoro pekusununguka muupenyu. Vanhu vazhinji vanofunga kuenda kune chimwe chinhu chinoshamisa uye chakanaka vanogona kuenda kune tattoo kati. Izvo zvinoreva zvakakosha uye zvinoshamisa kuti unzwisise. Mifananidzo yekati yakawedzerwa pane zvimwe zvinhu kuti ave nechokwadi chokuti vane zvakasiyana zvakasiyana kubva pane zvaungambofunga kare. Zvinoreva chikwata chekati chinogona kunge chichifadza uye ndicho chikonzero chizhinji chevakadzi vanoenda nacho. Kunyatsoteerera kunouya nahwo hakugoni kuoneka uye kune kukosha kwekuberekwa kwekuti vanhu vakawanda vanoda kuuya pedyo nekuguma kwezuva.
Dzvanya pano kuti utarise bhedzino rekudzivirira kate yemifananidzo yevarume nevakadzi.
Mukati weTattoo zvinoreva
Mifananidzo yepakati inoreva zvinhu zvizhinji kune vanhu vakawanda. Izvi zvinogona kureva zvinhu zvinotevera, Kubatana kwemurume nemukadzi, Atheism, Masvikiro, kurwadziwa kuburikidza nerudo kana kurasikirwa, Rugare, Ruregerero, Simba, Kushinga, ChiKristu / Kutenda kwechiKristu, Upenyu, Zuva / Zuva-Kunamata, Kuenzana, Kutambura, Rufu , Gothic / Goth tsika, Spirituality, Chikadzi, Kuzvitsaurira, Constellation, Kukudzwa, Kukwira, Cultural / family heritage uye Memory yewaidiwa. Murairo wepamuchinjikwa unozivikanwa zvikuru uye une munhu, wakadzika, tsika, uye chiitiko chakakosha chinogona kugadzirwa.
Varume nevakadzi vanoshandisa tattoo nekuda kwezvikonzero zvakawanda uye nemashoko akawanda ekureva kuti tattoo inouya pamwe chete. Vanhu vazhinji vanozviita kuti zvioneke zvinoshamisa uye iwe ndiwe unosarudza kuti chii chaunoda kuti muchinjikwa wako ureve. Pakuguma, ndizvo zvaunoita muchinjikwa wako kuti zvichave kwauri. Murairo wepamuchinjiki unogona kuwedzerwa kune zvinhu zvakawanda uye kunyange nemashoko kuti uchinje maitiro ayo anotaridzika. Tora somuenzaniso, muchinjikwa unouya nenzira dzakasiyana-siyana uye hukuru. Iko hakuna chikamu chemuviri chisingakodzeri mukati. Chii chinoreva chirevo chemuchinjikwa? Vanhu vazhinji vane zvinoreva zvakasiyana. Zvakakosha zvikuru kuti iwe uzive kuti uri kuinii mumuviri wako.
Dzvanya pano kuti uone chinyorwa chemazuva ano chimiro chevarume nevakadzi.
Zuva revakafa tato rinoreva
Zuva revakafa rinorehwa zvinorehwa rinogona kushandiswa kutaura pamusoro pezvinhu zvakawanda. Chiratidzo chinomiririra humwe hunobudirira hunotaura pamusoro pevanoda vakarasika. Chiratidzo chinogona kushandiswa kutaura pamusoro pekuyeuka, rufu, mweya, kudzoka, Mexico, kunamata uye kudzoka. Zuva revakafa rinogona kushandiswa pakupemberera shamwari neshamwari dzinofanirwa kunge dzakapfuura. Mumutauro wekuMexico, inonzi tattoo yakave yakakurumbira.
Zuva revakafa Mitambo yekutaurirana inoreva kubva kune imwe nzvimbo kune imwe. Kune marudzi akasiyana eZuva revakafa uye vane zvarinoreva zvakare. Pfungwa yokuti Zuva revakafa rinoreva kufa nevanhu vakawanda vangave vasiri chokwadi kunyanya kana vakwevedzwa necheka guru reziso. Zuva revakafa rinogona kukweverwa nenzira dzakawanda uye dzinopedzisira rine zvinorehwa zvaunoda. Zuva revakafa runyora rinogona kuva chiyeuchidzo cheumwe munhu anofa uyewo kuti isu tose tinofanira kurarama hupenyu huno huzere. Zvirongwa zveZuva revakafa zvinewo zvarinoreva maererano nezvaunoda kuti zvive.
Dzvanya pano kuti utarise zuva rekupedzisira revakafa maitiro ekugadzira mifananidzo yevarume nevakadzi.
Moyo wekutora zvinoreva kuremekedza, kuda uye rudo. Pane zvimwe zvinoreva moyo uye izvi zvinoreva kubva kunzira yavanomiririra. Nzira iyo mwoyo inoswededzwa inoreva zvinhu zvakawanda kumunhu anorema. Mavara, maumbirwo uye ukuru hwetambo ndeimwe chinhu chinoita kuti zvinoshamisa zvinoshamisa. Iwe unogona kuishandisa kuti utaure nyaya yerudo. Mwoyo unoshandiswawo nedzimwe tsika dzechitendero nekuda kwekukosha kwahwo. Nehuwandu hwemoyo huripo uye chiito chekufananidzira icho chinomiririra, chero munhu anogona kuchishandisa. Iwe unogona kushandiswa kwemwoyo uri pedyo nemutsika wako pakuita mamwe mazwi akasimba pamuviri wako.
Mifananidzo yemwoyo ndeimwe yemhando dzakanakisisa dzekuti iwe unogona kuona zvakapoteredza. Iko isiri uye inokosha. Haasi munhu wese waunoona aya mavara. Paunenge uchitsvaga chimiro chekunyora kuti utsvake rusununguko rwako, iyi tattoo inongova imwe chete yokuenda nokuda kwekunaka uye kukosha. Nyorenda yemwoyo haisi iyo yakakurumbira chete asiwo inofadza kuona apo mharidzo yakawedzerwa kwairi. Miseve inowanikwawo kune iyo kuti iudze nyaya.
Dzvanya pano kuti utarise mapepa emangwana mapikicha pfungwa yevarume nevakadzi.
tattoo yezisoshumba tattoozuva tattoossleeve tattoosmwedzi tattoosAnchor tattooshanzvadzi tattoosshamwari yakanakisisa tattoosbirds tattoosHeart Tattoosmaoko tattoosinfinity tattoowatercolor tattootattoos for girlsangel tattoosmimhanzi tattoosarm tattoosarrow tattoocute tattooschifuva tattoosbutterfly tattoostribal tattooseagle tattoosrudo tattoosGeometric Tattoosneck tattooscherry blossom tattookorona tattoosflower tattoosscorpion tattooelephant tattoomehndi designfoot tattooscompass tattoocross tattooskoi fish tattoocouple tattoosoctopus tattootattoo ideasrose tattoosback tattooscat tattoosdiamond tattoozodiac zviratidzo zviratidzolotus flower tattoorip tattoostattoos kuvanhuFeather TattooAnkle Tattooshenna tattoo